Eric Abidal oo hoosta ka xariiqay sababihii ka dambeeyay guuldarradii Barcelona ka soo gaartay Liverpool – Gool FM
(Barcelona) 17 Nof 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona ee Eric Abidal ayaa isku dayay inuu falanqeeyo guuldaradii niyadjabka aheyd ay kala soo laabteen Liverpool lugta labaad wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkii hore.
Barcelona ayaa 3-0 kaga soo adkaatay kooxda Liverpool kulnka lugta hore wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ee ka dhacay garoonka Camp Nou, laakiin musiibadii Roma ayey markale kala kulmeen garoonka Anfield, kaddib markii loogu awood sheegtay 4-0.
Haddaba wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona ee Eric Abidal waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan marka hore ka hadli doonaa kulankii lugta hore, dhamaan taageerayaasha Barcelona waxaay xasuustaan natiijada in ka badan waxqabadka, waxay ahayd ciyaar aad u adag natiijada ugu dambaysayna kama tarjumeyso waxa dhacay”.
“Kulankii lugta labaad, waxaan u baahneyn gool, waxaan iska luminay inaan gool dhalino, haddii aan gool dhalin laheyn ma jirto cid xasuusan laheyd Liverpool, taasi waa waxa aan ka fekerayay marka aan fadhiyay qeybta tarbuunka, waxay aheyd inaan ka gudubno”.
“Habeenkii Anfield, waxay aheyd dhacdo ka duwan tii Roma, sababtoo ah iyagu ma aheyn laba kooxood oo si isku mid ah u dhameystiran, balse waxay ahaayeen laba ciyaarood ee isku mid ah, Liverpool ma ahayn Roma, cashir ayaan ka baranay arrintaas, waa inaad xasuusataa in farqiga u ahaa gool, wuxuuna goolkaas matalayay xilli ciyaareedka”.